के कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको गति घट्दैछ ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
के कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको गति घट्दैछ ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २९ चैत्र शनिबार १०:०५
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)का प्रमुख डा. टेड्रस एड्हानोम गेहब्रेयससले केही युरोपेली देशमा सङ्क्रमणको गति घटेकोमा सन्तोष प्रकट गरेका छन् । अमेरिकामा पनि अधिकारीहरूले त्यहाँ कोरोनाभाइरसको महामारी अब उच्च तहमा पुग्न लागेको हुनसक्ने बताएका छन् ।
ह्वाइट हाउसको कोरोनाभाइरस कार्यदलकी प्रमुख डिबोरा बिक्र्सले शुक्रवार उत्साहप्रद सङ्केतहरू देखा परेका तर अझै पनि महामारी उच्च विन्दुमा पुगिनसकेको बताइन् । यसबीच डा. टेड्रसले भाइरस अब अन्य देशमा तीव्र दरले फैलिरहेको चेतावनी दिएका छन् । उनले अफ्रीकामा ग्रामीण क्षेत्रमा भाइरस पुगेको बताए ।
“अफ्रिकी महादेशका १६ देशमा हामीले सङ्क्रमणका केही समूहगत मामिला तथा समुदायमा सङ्क्रमण देखिरहेका छौँ,“ उनले भने । “सङ्क्रमण फैलिएमा शहरको जस्तो सुविधा उपलब्ध नभएको ग्रामीण क्षेत्रका पहिलेदेखिनै चापमा परेका स्वास्थ्य प्रणालीहरूमा अत्यन्त कठिनाइ हुनसक्छ।“